မေရီလန်းပြည်နယ် Bethesda မှာရှိတဲ့ Walter Reed စစ်ဆေးရုံ အထူးကုသခန်းသို့ သမ္မတ Trump ရောက်ရှိ
COVID-19 အကူးစက်ခံနေရတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကို ဆေးရုံတင်ထားပါပြီ။
သမ္မတထရမ့်ကို မေရီလန်းပြည်နယ် Bethesda မှာရှိတဲ့ Walter Reed စစ်ဆေးရုံ အထူးကုသခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ကုသပေးနေတယ်လို့ သမ္မတအိမ်ဖြူက ဒေသစံတော်ချိန် သောကြာနေ့ ညနေမှာ ပြောပါတယ်။
အသက် ၇၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သမ္မတ ထရမ့်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး သတိထားဆောင်ရွက်တဲ့ အနေနဲ့ နောက်ရက်အနည်းငယ် လောက် အဲဒီဆေးရုံမှာပဲ စောင့်ကြည့်ကုသမှာ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအိမ်ဖြူ ပြန်ကြားရေးအရာရှိ Kayleigh McEnany က ပြောပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ သမားတော်ကြီးနဲ့ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ အထူးသတိထားတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပြီး သမ္မတအနေနဲ့ မူလတာဝန်တွေကို နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဒီ Walter Reed ဆေးရုံကနေပဲ ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး အရာရှိက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုပါတယ်။
သမ္မတမှာ အဖျားအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ ဒီကိစ္စအကျွမ်းဝင်သူတဦးက ပြောသလို သမ္မတရဲ့ သမားတော် Sean P. Conley ကလည်း သမ္မတဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေပေမယ့် စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာမှု ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ သမ္မတကတော် Melania Trump တို့ဟာ COVID-19 ရောဂါပိုး အကူးစက်ခံနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာ သမ္မတဟာ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားလာရပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ သမ္မတအိမ်ဖြူ ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲ Mark Meadows က သောကြာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
သမ္မတမှာ ရောဂါလက္ခဏာ နဲနဲပြလာကြောင်းနဲ့ သမ္မတရဲ့ ကျန်းမာရေးတင်မကပဲ အန္တရာယ်ကင်းရေးနဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်သလို အမေရိကန်ပြည်သူအားလုံးအတွက်ပါ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း. Meadows က သမ္မတအိမ်ဖြူမှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သမ္မတဟာ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ရုံတင်မကပဲ တက်ကြွမှုပါ ရှိပြီး အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ကိုယ်စား ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်ဖို့ ချထားတဲ့ သံဓိဌာန် အတိုင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်ရပ်တည်ဆဲပဲ လို့လည်း ပြောပါတယ်။
သောကြာနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ သမ္မတထရမ့်က သူနဲ့ သမ္မတကတော်တို့မှာ COVID 19 အကူးစက်ခံနေရကြောင်းနဲ့ သူတို့ဟာ စပြီး quarantine လုပ် သီးခြားခွဲနေနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို ၂ ယောက်အတူ လက်တွဲ ကျော်ဖြတ်ကြမှာ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတက သူ့တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့တာပါ။
သမ္မတကတော် Melania Trump ကလည်း COVID-19 အကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက် ဒီနှစ်ထဲ အမေရိကန် အများအပြားလိုပဲ သူနဲ့သမ္မတတို့ နေအိမ်မှာပဲ quarantine ဝင် သီးခြားခွဲနေကြကြောင်းနဲ့ သူတို့ ၂ ဦးစလုံး နေကောင်းသလို စီစဉ်ထားတဲ့ တွေ့ဆုံမှုအားလုံးကိုတော့ ဆိုင်းငံ့လိုက်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပွဲစဉ် အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ် လို့လည်း သမ္မတအိမ်ဖြူအရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ်။သမ္မတရဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်းထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန် စတော့ရှယ်ယာဈေးတွေ တဟုန်ထိုး ကျဆင်းသွားသလို တလကျော်ပဲ လိုတော့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ဖို့ ပြင်ထားတဲ့ သမ္မတရဲ့ မဲဆွယ်မှုတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို COVID 19 အကူးစက်ခံရတဲ့အတွက် လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပြိုင်ဘက် ဒုသမ္မတဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင် လောက် လူကြိုက်မများဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစစ်တမ်းတွေမှာ ပြနေတဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက် မဲဆွယ်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာစေတာပါ။
ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရတဲ့ သမ်မတ Trump ကို စဈဆေးရုံမှာ ပွောငျးရှကေု့သမှုပေး
COVID-19 အကူးစကျခံနရေတဲ့ အမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ ကို ဆေးရုံတငျထားပါပွီ။
သမ်မတထရမျ့ကို မရေီလနျးပွညျနယျ Bethesda မှာရှိတဲ့ Walter Reed စဈဆေးရုံ အထူးကုသခနျးကို ပွောငျးရှကေု့သပေးနတေယျလို့ သမ်မတအိမျဖွူက ဒသေစံတျောခြိနျ သောကွာနေ့ ညနမှော ပွောပါတယျ။
အသကျ ၇၄ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ သမ်မတ ထရမျ့အတှကျ ကွိုတငျကာကှယျရေး သတိထားဆောငျရှကျတဲ့ အနနေဲ့ နောကျရကျအနညျးငယျ လောကျ အဲဒီဆေးရုံမှာပဲ စောငျ့ကွညျ့ကုသမှာ ဖွဈကွောငျး သမ်မတအိမျဖွူ ပွနျကွားရေးအရာရှိ Kayleigh McEnany က ပွောပါတယျ။
သမ်မတရဲ့ သမားတျောကွီးနဲ့ ကနျြးမာရေးကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ အကွံပေးခကျြအရ အထူးသတိထားတဲ့ အနနေဲ့ အခုလို လုပျဆောငျတာ ဖွဈပွီး သမ်မတအနနေဲ့ မူလတာဝနျတှကေို နောကျရကျအနညျးငယျအတှငျး ဒီ Walter Reed ဆေးရုံကနပေဲ ထမျးဆောငျမှာ ဖွဈကွောငျး ပွနျကွားရေး အရာရှိက ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ ပွောဆိုပါတယျ။
သမ်မတမှာ အဖြားအနညျးငယျရှိတယျလို့ ဒီကိစ်စအကြှမျးဝငျသူတဦးက ပွောသလို သမ်မတရဲ့ သမားတျော Sean P. Conley ကလညျး သမ်မတဟာ ပငျပနျးနှမျးနယျ နပေမေယျ့ စိတျဓါတျ ခိုငျမာမှု ရှိကွောငျး ပွောပါတယျ။
သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့နဲ့ သမ်မတကတျော Melania Trump တို့ဟာ COVID-19 ရောဂါပိုး အကူးစကျခံနရေကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့တဲ့နောကျမှာ သမ်မတဟာ သိပျမပွငျးထနျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာ ခံစားလာရပမေယျ့ စိတျဓါတျကွံ့ခိုငျလကျြရှိတယျလို့ သမ်မတအိမျဖွူ ဝနျထမျးအကွီးအကဲ Mark Meadows က သောကွာနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။
သမ်မတမှာ ရောဂါလက်ခဏာ နဲနဲပွလာကွောငျးနဲ့ သမ်မတရဲ့ ကနျြးမာရေးတငျမကပဲ အန်တရာယျကငျးရေးနဲ့ ကောငျးကြိုးအတှကျ လုပျဆောငျမှာ ဖွဈသလို အမရေိကနျပွညျသူအားလုံးအတှကျပါ ဆကျပွီး လုပျဆောငျမှာ ဖွဈကွောငျး. Meadows က သမ်မတအိမျဖွူမှာ သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သမ်မတဟာ စိတျဓါတျကွံ့ခိုငျရုံတငျမကပဲ တကျကွှမှုပါ ရှိပွီး အမရေိကနျပွညျသူတှေ ကိုယျစား ကွိုးကွိုးစားစားလုပျဆောငျဖို့ ခထြားတဲ့ သံဓိဌာနျ အတိုငျး ခိုငျခိုငျမာမာ ဆကျရပျတညျဆဲပဲ လို့လညျး ပွောပါတယျ။
သောကွာနေ့ မနကျအစောပိုငျးမှာ သမ်မတထရမျ့က သူနဲ့ သမ်မတကတျောတို့မှာ COVID 19 အကူးစကျခံနရေကွောငျးနဲ့ သူတို့ဟာ စပွီး quarantine လုပျ သီးခွားခှဲနနေပွေီ ဖွဈကွောငျးနဲ့ ဒီကိစ်စကို ၂ ယောကျအတူ လကျတှဲ ကြျောဖွတျကွမှာ ဖွဈကွောငျး သမ်မတက သူ့တှဈတာမှာ ရေးခဲ့တာပါ။
သမ်မတကတျော Melania Trump ကလညျး COVID-19 အကူးစကျခံခဲ့ရတဲ့နောကျ ဒီနှဈထဲ အမရေိကနျ အမြားအပွားလိုပဲ သူနဲ့သမ်မတတို့ နအေိမျမှာပဲ quarantine ဝငျ သီးခွားခှဲနကွေကွောငျးနဲ့ သူတို့ ၂ ဦးစလုံး နကေောငျးသလို စီစဉျထားတဲ့ တှဆေုံ့မှုအားလုံးကိုတော့ ဆိုငျးငံ့လိုကျကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
သမ်မတထရမျ့ရဲ့ နိုငျငံရေးပှဲစဉျ အားလုံးကို ပယျဖကျြခဲ့တယျ လို့လညျး သမ်မတအိမျဖွူအရာရှိ တဦးက ပွောပါတယျ။သမ်မတရဲ့ ကနျြးမာရေးသတငျးထှကျလာခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အမရေိကနျ စတော့ရှယျယာဈေးတှေ တဟုနျထိုး ကဆြငျးသှားသလို တလကြျောပဲ လိုတော့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျဖို့ ပွငျထားတဲ့ သမ်မတရဲ့ မဲဆှယျမှုတှလေညျး ရပျဆိုငျးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို COVID 19 အကူးစကျခံရတဲ့အတှကျ လာမယျ့ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ သမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ ဒီမိုကရကျတဈပါတီက ပွိုငျဘကျ ဒုသမ်မတဟောငျး ဂြိုးဘိုငျဒငျ လောကျ လူကွိုကျမမြားဘူးလို့ ရှေးကောကျပှဲအကွိုစဈတမျးတှမှော ပွနတေဲ့ ရီပတျဘလဈကငျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့အတှကျ မဲဆှယျဖို့ အခကျအခဲတှေ ဖွဈလာစတောပါ။